कसरी कसरी "अर्डर गर्न" वा "त्यसैले त्यो" मा स्पेनिश मा
वाक्यांश उद्देश्यका अधीनस्थहरूको उदाहरणहरू हुन्
"क्रम मा," "त्यसो त", "र" को उद्देश्यको साथ "उद्देश्यको अधीनस्थको रूपमा चिनिन्छ" - र स्पेनीमा ती विचारहरू भरिएका थुप्रै तरिकाहरू छन्।
'अर्डर गर्न' को लागि पारा र पारा क्वी प्रयोग गर्दै
उद्देश्य को सबै भन्दा सामान्य स्पैनिश अधीनस्थ संयोजन पैरा वा वाक्यांश para que हो , निम्न उदाहरणहरुमा जस्तै:
वीररको लागि आओ, कमरको लागि कुनै पनि जीव। (बाँच्नका लागि खाई, खाना खानको लागि बाँच्नुहोस्।)
यस पन्ने को पेडो, यस प्रकार को कम से कम कैलोरी को उपयोग गर्न को लागि। (वजन कम गर्न, तपाईंले आफ्नो आहारमा कैलोरीहरूको संख्या घटाउनु पर्छ।)
Haga क्लिक गर्नुहोस यस कलाकृति मा सबै भन्दा कम कोनोट को लागि। (यस कलाकारको अन्तिम कार्यहरू बारे थप जान्नको लागि तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।)
यो एक होसर को सूची मा कुनै पनि गलत तरीका को रूप मा। (म एक सूची बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ (वा त्यस्ता ) तपाईंले मेरो चीजहरू बिर्सनुहुन्न।)
यस प्रकार को शामिल हो, यसैले अनुमति दिनुहोस विज्ञापन। (मैले के भन्न चाहन्छु भनेर बुझ्नको लागि, पहिला मलाई तपाइँलाई बताउन दिनुहोस्।)
यदि तपाईं यस कुरा को बारे मा जान्छं। (तपाइँ उसलाई पानी पनि चढाउन सक्नुहुन्छ (वा त्यस्ता ) उसले पिउन सक्छ।)
Hayocos को लागी कोकोनियन समुद्र मा फैल छ। (धेरै चालहरू छन् ताकि खाना पकाउनु सजिलो छ।)
ध्यान दिनुहोस् कि अधिकतर अवस्थाहरूमा तपाइँले एउटै स्पेनिस अनुवादको लागि "क्रमशः" वा "त्यसैले (त्यो)" को लागि काम गर्दछ।
माथि उल्लेखित उदाहरणहरूको रूपमा, पैरा कण पछि उपजीवक मूड मा क्रिया गरिन्छ, जबकि पैरा एक्लै खडा नै अनन्त हुन्छ ।
साथै तपाईं ध्यान दिन सक्नुहुनेछ जब " पैरा + अनिनो" निर्माण प्रयोग गरिन्छ, दुवै कार्यहरू कार्य गर्ने व्यक्ति एउटै हो, र " para que + subjunctive" प्रयोग गर्दा व्यक्तिहरू भिन्न हुन्छन्। यी सरल उदाहरणहरूमा फरक हेर्नुहोस्:
कमरको लागि ट्रान्जो। (म काम गर्छु कि म खान्छु।)
यस कम्पैक्ट डिस्क देखि नमूना पटरिहरु। (म काम गर्छु कि तिमी खान्छौ।)
यो नियम सँधै पछ्याइएको छैन। केही परिस्थितिहरूमा यो सम्भव छ जब आफैंका लागि प्रयोग गर्न को लागी जब क्यान्सरको पाना हो, वा (अधिक प्राय) क्यानको लागि प्रयोग गर्न जब यो छैन। तर यहाँ दिइएको विधि सबैभन्दा सामान्य हो र विदेशीहरूलाई प्रयोग गर्न को लागी सबै भन्दा आसान छ भने तिनीहरू व्याकरणीय ब्लन्डरहरू बनाउनबाट टाढा राख्न चाहन्छन्।
उद्देश्यका अन्य स्पेनिश उपनिदेशकहरू
यहाँ उद्देश्यका अन्य स्पेनी उपनिदेशकका केही उदाहरणहरू छन् (बोल्डफेसमा):
Salieronacazar por el día। (तिनीहरू दिनको लागि शिकार गर्न छोडेनन्। नोट, यो उदाहरणमा, जब उद्देश्यको अधीनस्थ को रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यो अनन्तको पछि लागिएको छ। ए यो अधीनस्थ को रूपमा प्रयोग गरिन्छ जुन क्रियाकलापले संकेत गर्दछ एक ठाउँमा अर्को देखि।)
ल्लेगन एक कमर मारिस्कोस। (तिनीहरू समुद्री खाना खाने क्रममा थिए ।)
यस प्रकार को रूप मा एक साथ को रूप मा। (गोप्य रूपमा एक सल्लाहकार संग बोल्नको लागि कार्यालयलाई कल गर्नुहोस्)।
एक फाइनल मा एक समुद्र को समुद्र तट मा छ, तर संग्राहक को रूप मा एक पल्ट को रूप मा एक को उपयोग गर्दछ। (तपाईंको अनुप्रयोगलाई उपयोगी हुनको लागी, सम्बन्ध भेट्टाउन अयोग्य हुनु पर्छ कि उनि इमेजिकल लगाउँछन्।)
Fueronalas ruinas को el fin de aprender अधिक। (तिनीहरू सिक्नको लक्ष्यको साथ अधिक खण्डहरूमा गए।)
यस को रूप मा राम्रो तरिकाले सक्रिय कार्य को रूप मा छ, यस को रूप मा संचालन को लागी को रूप मा संचालित। (पर्यटनको लागि क्रमशः गतिविधिको लागि, यो अत्यावश्यक छ कि आचरणका कोडहरू अपनाईएको छ।)
यस प्रविधि को उपयोग गर्न को लागि उत्पादन को लागि, र अधिक पढें। (खेती उत्पादन नियन्त्रण गर्न आदेश , कोटा प्रणाली योजना बनाइदैछ।)
तपाईं आफ्नो होमियोपेटिन्स पोजीशंस मा एकदम सही छ, कुनै पनि सहभागिता नहीं हो सकता। ( त्यसोभए समूहहरू सम्भव भएसम्म समानुभूति हुन्छ, हामी बेरोजगार व्यक्तिहरू भाग लिन चाहन्छौँ।)
तपाईँले अनुमान गरेको हुन सक्दछ, एक फाइनल र एक फिन डी que बीचको भिन्नता, र con objeto de र con objeto de que को बीच, पार्स र पैरा कतार बीचको भिन्नतासँग समान छन्।
Con el fin de and con objeto de spencils spanish spelling spelling spelling spelling spelling spanish spanish
35 देश र स्पेस नामहरू जुन स्पेनमा परिभाषित लेख प्रयोग गर्दछ
इटालियनमा शब्द "प्रिन्डेरे" कन्जुगेट कसरी गर्ने?
जर्मन विशेषण को प्रयोग को रूप मा Adjectives र Adverbs को रूप मा
अंग्रेजी मा रिफ्लेक्सिभ डेनिश
कसरी कन्जुगेट "एसेयर" (प्रयास गर्न)
इटालियन Verb Conjugations: केडीरे
कसरी कन्जुगेट "योगदानकर्ता" (योगदान गर्न)
'अधिक' अनुवाद गर्दै
स्पिन कास्ट रीलमा स्पूलिङ लाइन
Chromosome संरचना र प्रकार्य
द्वितीय विश्वयुद्ध: यूएसएस आइडीहो (बीबी -42)
मोलियत र अस्थिरता को बीच के अंतर छ?
बिन अन्वेयरियर: फ्रान्सेलीमा शुभ जन्मदिन
VB.NET मा DataSet को एक परिचय
यस कला को इटाली मा द रॉयल संग्रह - द बार्को
किन निर्दोष मानिसहरूले झूटा धारणाहरू गर्छन्?
परिमार्जन (व्याकरण र अर्थशास्त्र)
तथ्याङ्क र राजनीतिक पोल
बीटल्स गीत: "नमस्ते अलविदा"
धन्यवाद दिन कहिले हुन्छ?
भौतिकशास्त्र अध्ययन गर्न मलाई के कस्ता योग्यताहरू चाहिन्छ?
नेपोलियन युद्ध: कोरुना को युद्ध
'ए मिडिमरमेर नाइट ड्रीम' ले लिस्न्डर - वर्ण विश्लेषण
अन्तरक्रियात्मक गणित वेबसाइटहरू
भौतिकी मा Quarks को परिभाषा